साथीहरूसँग घडी 30
के यो सब्जी, फल वा बिरुवाको नयाँ प्रजाति विकास गर्न सम्भव छ कि कुनै अन्य ज्ञात प्रजातिहरूबाट पुरा तरिकाले फरक र फरक छ? यदि त्यसो भए, यो कसरी भयो?
यो सम्भव छ। त्यस रेखामा सब भन्दा उल्लेखनीय र व्यापक रूपले परिचित सफलता हासिल गर्ने व्यक्ति क्यालिफोर्नियामा सान्ता रोजाका लुथर बुरबank्क हुन्। श्री बुरबान्कले अझसम्म हामीलाई थाहा छ, पूरै बिभिन्न र नयाँ प्रजातिहरू विकास गरेको छ, तर यदि उसले आफ्नो काम जारी राख्यो भने उसलाई त्यसो गर्नबाट रोक्नको लागि केही छैन। हालसालैसम्म हामी जान्दछौं, उनका प्रयासहरू फलफूल र बोटबिरुवाका केही प्रजातिहरू पार गर्नका लागि निर्देशित भएका छन्, बिल्कुल बिभिन्न प्रजातिहरू उत्पादन गर्दैनन्, तर एक दुबै वा दुई वा कुनै एकको विशेषता रहेको। नयाँ विकास विकासमा प्रयोग हुने अधिक प्रजातिहरू। धेरै खाताहरू श्री बुुरन्कको कामका बारे प्रकाशित भइसकेका छन, यद्यपि यो सम्भव छ कि उनले आफूले जानेका र आफूले गर्ने सबै कुरा बताएनन् जुन उनको सफलता हो। उसले मानिसलाई अतुलनीय सेवा प्रदान गरेको छ: उसले अहिलेसम्म केही काम नलाग्ने र आपत्तिजनक बृद्धि गरेको छ र त्यसलाई उपयोगी झारपट्टि, स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ वा सुन्दर फूलहरूको रूपमा विकसित गरेको छ।
कुनै पनि तरकारी, बोट, फल, वा फूलहरू विकास गर्न सम्भव छ, जसबाट दिमागले कल्पना गर्न सक्छ। नयाँ प्रजाति विकास गर्न पहिलो चीज चाहिन्छ: यसलाई गर्भधारण गर्नु। यदि दिमागले नयाँ प्रजातिहरू गर्भधारण गर्न सक्दैन भने त्यो दिमागले विकास गर्न सक्दैन, यद्यपि अवलोकन र प्रयोगबाट पुरानो प्रजातिहरूको नयाँ प्रजातिहरू उत्पादन गर्दछ। जसले नयाँ प्रजातिहरू आविष्कार गर्न चाहन्छ उसले आफैले हुने प्रजातिको जीनसबारे राम्ररी चिन्तन गर्नुपर्दछ र त्यसपछि यसमा ध्यानपूर्वक र आत्मविश्वास राख्नु पर्छ। यदि ऊसँग आत्मविश्वास छ र उसले आफ्नो दिमागलाई मेहनतीका साथ प्रयोग गर्ने छ र उसको विचारलाई अन्य प्रकारका तर्फ जान दिँदैन, र बेकारको फन्कोमा डुब्न दिँदैन, तर ऊसँग भएको प्रजातिमा सोच्न र रोटी दिन्छ भने समयको क्रममा ऊ गर्भधारण गर्नेछ सोच्नुहोस् जो उसलाई प्रकार देखाई उसले चाहेको छ। यो उनको सफलता को पहिलो प्रमाण हो, तर यो पर्याप्त छैन। उसले आफूले सोचेको बिचारलाई निरन्तरता दिईरहेको छ र अरुलाई न भड्काईकन त्यस बिचारलाई धैर्यतापूर्वक सोचिरहनुपर्दछ। उसले सोच्न जारी राख्दा, सोचाइ स्पष्ट हुनेछ र नयाँ प्रजातिहरू संसारमा ल्याउन सकिने माध्यमहरू सरल बनाइनेछ। यसै बीचमा, उनले आफैंलाई ती प्रजातिहरूसँग काम गर्न लगाउनुपर्दछ जुन नजिकैको उसको दिमागमा छ; तिनीहरूमा महसुस गर्न; बिभिन्न आन्दोलनहरु जान्न र सहानुभूति र यसको धमनी र नसिका माध्यम बगैचा को बगैंचामा प्रभावित गर्न, आफ्नो मनपर्ने महसुस गर्न र तिनीहरूलाई आपूर्ति गर्न, उसले छनौट गरेको बोट पार गर्न र त्यसपछि आफ्नो प्रजाति मा सोच्न क्रसिंग, यो उसले रोजेको दुई प्रजातिहरुबाट विकास भएको महसुस गर्न, र यसलाई शारीरिक रूप दिन। ऊ गर्नुहुन्न, र ऊ गर्दिन, यदि ऊ यति टाढा गयो भने, उनी निराश हुनेछन् यदि उसले एकैचोटि नयाँ प्रजातिलाई उत्पादनको रूपमा देखेन भने। उसले फेरि कोसिस गर्नुपर्दछ र फेरि प्रयास गर्नुपर्दछ र समय बित्दै जाँदा नयाँ प्रजातिहरू अस्तित्वमा आएको देखेर ऊ रमाउनेछ, किनकि उसले आफ्नो भाग गरेमा पक्कै गर्छ।
नयाँ प्रजातिलाई अस्तित्वमा ल्याउने व्यक्तिलाई सुरुमै वनस्पतिशास्त्रको थोरै ज्ञान हुनुपर्दछ, तर उसले आफूलाई यो कामका बारे जान्न सक्ने सबैसँग परिचित गर्नुपर्दछ। सबै बढ्दो चीजहरूको भावना छ र मानिसले उनीहरूसँग महसुस गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्दछ, यदि उसलाई उनीहरूको तरिका थाहा छ। यदि ऊ त्यहाँ भएको उत्तम छ भने, उसले आफूसँग भएको सबै भन्दा उत्तम दिनै पर्छ। यस नियमले सबै राज्यहरूमा राम्रो गरी राख्छ।